ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ | Page 8 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
29.7.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဂျွတ်ခနဲ့ ဂျွတ်ခနဲ ဇက်ချိုးရတာဟာလည်း ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရသာတစ်ခုပဲနော်။ ဒီလို ဇက်ချိုးတာဟာ ဘာအန္တရာယ်တွေများ ရှိနေမလဲ? ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်။...
28.7.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
တစ်ပတ်လုံး ရုံးတက်၊ ကျောင်းတက်နေရသူများအဖို့ တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ ဇိမ်အကျဆုံးနေ့ရက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် အပေါင်းအသင်းများနဲ့ night out ထွက်ဖို့...
ငါးရိုး နင်တဲ့အခါ ...
ထမင်းစားရင်း ရုတ်တရက် လည်ချောင်းထဲ စူးခနဲဖြစ်ပြီး အရိုး နင်ပါလေရော။ ဒီလောက် သေချာနွှင်ပြီး စားနေရက်နဲ့ ငါးရိုးကြီးက ဘယ်လိုပါသွားတာလဲ?
27.7.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
• စိတ်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိပါစေ။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ကျောင်းစတဲ့တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သက်သာရာရအောင် နည်းလမ်းရှာပေးပါ။
အလိုလိုနေရင်း တစ်နေ့တခြား ပိန်လာရင် အကြောင်းရင်းရှာဖို့ လိုပါတယ်
လူတိုင်းနီးပါးဟာ တစ်နှစ်တာအတွင်း ပိန်လိုက်ဝလိုက် ဖြစ်လေ့ရှိကြတာ သဘာဝတစ်ခုပါ။ အားလပ်ရက်ကာလများတွင်း တဝတပြဲ စားသောက်မိရာကနေ ၀ိတ်တက်လာနိုင်သ...
အအိပ်လွန် အငိုက်ရောဂါ ခံစားနေရသူတွေရှိလား
" ဟာ ဒီကောင်မလေး အိပ်နေပြန်ပြီ ... ထစမ်း ... ထစမ်း "
ဒီလို ခဏခဏ အဆူခံနေရတာ ကေသီအတွက်တော့ ရိုးနေပါပြီ။
26.7.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ခေါင်းကိုက်တတ်နေပြီလား စိတ်ညစ်စရာတွေများပြီး ခေါင်းတွေ ထွေလာပြီလား။ ခေါင်းကိုက်တာ လချီကြာနေပြီလား။ ဒါလေးတွေ ဖတ်ထားနော်။
ကြီးမှ ဝက်သက် မပေါက်စေဖို့ ...
ဝက်သက်ဆိုတာ ကလေးမှာပဲ ပေါက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးမှ ဝက်သက်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ အသက်အရွယ်မရွေး ဝက်သက် ပေါက်နိုင်ပါတယ်။